January 2019 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
टी–ट्वान्टी सिरिजको यूएई विरुद्दको पहिलो खेलमा नेपाल २१ रनले पराजित
काठमाडौं— १७, माघ ।
टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा यूएईसँग नेपाल २१ रनले पराजित भएको छ । युएईले दिएकाे १५४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा एक सय ३२ रनमात्र बनऔन सक्यो ।
नेपालका लागि सन्दीप जोराले सर्वाधिक ५३ रनको अर्धशतकीय पारी खेले भने सोमपाल कामीले २७ र कप्तान पारस खड्काले २५ रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकसम्म जोड्न सकेनन् ।
युएईका लागि महोम्मद नाभिद, सुल्तान एहमद र जोहर खानले समान २/२ विकेट लिए भने आमिर हायातले १ विकेट लिए । नेपालले सिरिजको दोस्रो खेल यहि शुक्रबार खेल्नेछ ।
यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएईले ६ विकेटको क्षतिमा एक सय ५३ रन जोडेको थियाे ।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र बसन्त रेग्मीले समान २/२ विकेट लिए भने सोमपाल कामी र अविनास बोहोराले १/१ विकेट लिए ।
युएईका लागि साइमान अनवरले सर्वाधिक ५९ रन जोड्दा महोम्मद उस्मानले ३० रन, महोम्मद बुटाले २० रन र सिपी रिजवानले २२ रनकाे योगदान गरे ।
राष्ट्रियसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद् राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक बिहीबार बहुमतले पारित भएको हो ।
बैठकको सुरूदेखि नै कांग्रेसका सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपनि अवरोध गरेकाले उनीहरूले छलफलसमेत बहिस्कार गरे ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले अनशनरत् डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेर वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सो विधेयकमा संशोधन हालेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद वृजेशचन्द्र लालले छलफलमा सहभागी हुँदै डा. केसीसँग भएका सम्झौताका बुँदा समेटेर नआएको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे ।
तर, उनको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भयो । विधेयकमाथिका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसदहरुको विरोधकाबीच अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरे । त्यसपछि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि लागू हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
रेष्टुरेन्ट र बारमा गरिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चद्वारा स्वागत
माघ-राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चले नेपालमा सञ्चालित रेष्टुरेन्टहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको स्वागत गरेको छ । मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको संस्था रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)को सोमबारको बैठकले सेवा शुल्क नलिने निर्णयको स्वागत गरिएको उल्लेख छ । रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको संस्था रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)को सोमबारको बैठकले सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो ।
यस अघि राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चले सेवा शुल्क खारेजीका लागि भन्दै परमादेश जारी गर्न गत आश्विन २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिट हाल बिचाराधिन अवस्थामा छ ।
यसअघि रेष्टुरेन्ट तथा बारको बिलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिएर आउँथ्यो।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमाअस्पताल भित्रैबाट बिमारी कुरुवा लुटिए
धरान— १७, माघ ।
सुनसरीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको केटिएम सेक्युरिटी प्रालिको लापर्वाहीले बिमारीका कुरुवा लुटिएका छन् ।
मेडिसिन युनिट १ वार्डमा आज बिहान तीन जना बिमारीका आफन्त लुटिएका छन् ।
उनीहरुको चार वटा मोबाइल, एक वटा चाँदीको औँठी एउटा बाला र नगद रु चार हजार ९०० लुटिएको विर्तामोड घर भएका बिमारीका आफन्त अमृतेश ठाकुरले जानकारी दिए ।
ठाकुरले श्रीमती सम्झना ठाकुरको पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरी युनिट १ सर्जरी वार्डमा राखेका थिए । राति चार्ज गरिरहेको बेला उनको मोबाइल हराएको थियो ।
यस्तै धरानका सनम राईको दुई वटा मोबाइल, ताप्लेजुङकी सीता इजमको दुई वटा औँठी, चुरा, झोला र रु तीन हजार ४०० नगद लुटिएको थियो ।
मोबाइल, पैसा र गहना लुटपाट भएपछि कुरुवाकै सक्रियतामा लुटेराको खोजी गरी प्रहरीलाई बुझाएका छन् । धनकुटा छिन्ताङ घर भएका राम थापालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
कुरुवाले नियन्त्रणमा लिएका थापालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा बिहान बुझाएको हो ।
उनका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको इप्रकाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमनकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
पश्चिमी वायु पुनः सक्रिय भएका कारण बिहीबार देशका अधिकांश भेगमा बदली तथा केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
गत शुक्रबार देशको पश्चिमी भेगबाट प्रवेश गरेको उक्त मौसमी प्रणाली केही कमजोर भएपछि मंगलबारदेखि क्रमिक सुधार आएको थियो ।
बुधबार घाम लागेपनि अपराह्नपछि मौसम बद्लियो ।
बुधबार रातिदेखि प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुको प्रभावले अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा बदली छ । अपराह्नपछि केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ ।
पश्चिमी वायुको प्रभाव बिहीबार रातिसम्म रहने र शुक्रबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार आउने महाशाखाका मौसमविद मीनकुमार अर्यालले जानकारी दिए ।
‘गएरातिदेखि प्रवेश गरेको पश्चिमी वायु अहिले क्रमशः मध्य भेग हुँदै पूर्वतर्फ सर्दैछ । यसरी अघि बढ्दा यो प्रणाली कमजोर हुने भएकाले मौसममा सुधार आउँछ । आगामी शनिबारदेखि आंशिक बदली रहेपनि मौसममा राम्रै सुधार हुने देखिन्छ’–उनले भने ।
मौसमविद अर्यालकाअनुसार अहिले जे–जति मौसमी प्रणाली देखापर्छन्, ती पश्चिमबाटै हुन्छन् । विशेष अवस्थाबाहेक पश्चिमी वायुले नै हिउँदे वर्षा गराउँछ ।
जाडोयाम (विन्टर सिजन)को अन्तिम चरण रहेकाले पनि मौसमी गतिविधि हेरफेर भइरहन्छ । अझै एक महिना पश्चिमी वायुको गतिविधि देखापर्ने मौसमविदको भनाइ छ ।
‘डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी’ विन्टर तथा ‘मार्च, अप्रिल र मे’लाई प्रि–मनसुन अवधि मानिन्छ ।
त्यसपछि वर्षायाम अर्थात् मनसुनी (दक्षिण पूर्वी हावाले गराउने) मौसमी प्रणाली अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुन्छ ।
खासगरी प्रि–मनसुनका बेला अपराह्नपछि या साँझतिर मेघगर्जनसहित वर्षा हुने र हुरीबतास चल्ने गर्छ ।
यसैबीच, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी बुलेटिन निकालेर पश्चिमी वायुको प्रभावले देशको पश्चिम र मध्य क्षेत्रमा सामान्य बदली भइ पश्चिमी भेगका थोरै स्थान र मध्य र पूर्वाका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै उच्च हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको हिमपातको सम्भावना औंल्याएको छ ।
राति देशका पश्चिमी भेगका थोरै स्थान र मध्य तथा पूर्वका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने हिमाली भेगमा हिमपात हुनेछ ।
शुक्रबार देशको पूर्वी क्षेत्र तथा पहाडी भेगमा मौसम सामान्यतया बदली रहनेछ भने बाँकी भेगमा आंशिक बदली रहनेछ । पहाडी भेग र हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
रातमा पनि पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा सामान्य हिमपातको सम्भावना छ ।
शनिबार देशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहनेछ भने बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबार बिहानैदेखि बदली भएका कारण बढी चिसो महसुस गरिएको छ ।
महाशाखाको पछिल्लो विवरणानुसार बिहीबार काठमाडौंको न्यूनतम् तापक्रम ३.२ र अधिकतम् तापक्रम १८.५ डिग्री सेल्सियस छ । बुधबार काठमाडौंको न्यूनतम् तापक्रम घटेर १ डिग्रीमा झरेको थियो ।
बिहीबार सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम् तापक्रम १ र अधिकतम् तापक्रम ११ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी अधिकतम् तापक्रम विराटनगरको २५ तथा सिमरा र नेपालगन्जको समान २३ डिग्री सेल्सियस छ ।
अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
बैठक सुरु हुनसाथ कांग्रेस सांसदहरु उभिएपछि सभामुखले कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले बोले लगतै सांसदहरु उठेका छन् ।
सांसद रिजालले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक गलत प्रक्रियाले पारित भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘गोविन्द केसीको ज्यानको रक्षा गर्नुपर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी यहाँबाट पारित भयो, त्यो गलत भयो, अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्दै, चिकित्सा शिक्षा सुधार हुने बाटो बन्द नगरौं । राष्ट्रिय सभाले त्यो बाटोले लेओस् भन्ने सत्ताको आग्रह रहनुपर्छ’ उनले भने ।
रिजालले अब संवादबाट यो काम गर्न सकिने भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाउन सभामुखलाई आग्रह समेत गरे । अब संवादको बाटोमा अगाडि बढौं, चिकित्सा शिक्षा परिमार्जन गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढोस्’ रिजालले भने ।
नेपाली कामदार जापान पठाउन ‘गोप्य’ छलफल गरिदैं
अमेरिकामा चिसोका कारण ७ जनाको मृत्यु
अमेरिकामा चिसोका कारण कम्तीमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
‘पोलार भोर्टेक्स’ नामक ध्रुवीय चक्रवातका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा ७ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको हो ।
चिसोले करोडौं मानिस प्रभावित भएका छन् । चिसोले अमेरिकाको मध्यपश्चिमी भेग बढी प्रभावित भएको छ ।
विस्कन्सिन, मिसिगन राज्यहरुका साथै सामान्यतया गर्मी क्षेत्र मानिने आलाबामा र मिसिसिपीका दक्षिणी भेगमा पनि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ ।
उत्तरी डाकोटाको तापक्रम माइनस ३७ र सिकागोको तापक्रम माइनस ३० डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ ।
सिकागोका केही ठाउँमा संसारकै सबैभन्दा चिसो मानिने अण्टार्कटिका भन्दा पनि बढी जाडो महसुस गरिएको छ ।
अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले केही राज्यमा आजबाट पुनः हिमपात हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विस्कन्सिन राज्यमा दुई फिटसम्म बाक्लो हिउँ पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले सर्वसाधारणलाई बाहिर निस्कदा गहिरो सास नलिन र सकेसम्म कम बोल्न सुझाव दिएका छन् ।